हिमाल खबरपत्रिका | तथ्यांकमा सुनाखरी नमूना बेगरको नालीबेली
तथ्यांकमा सुनाखरी नमूना बेगरको नालीबेली
संसारका विभिन्न संग्रहालयमा संग्रहित नमूनाका आधारमा नेपालमा ३८० प्रजातिका सुनाखरी पाइने सन् २०१७ मा प्रकाशित एक पुस्तकमा उल्लेख छ।
अद्भुत संरचना र विविध रङको सम्मिश्रणका कारण सुनाखरी अर्थात् ‘अर्किड’ को सुन्दरतादेखि मुग्ध नहुने कमै हुन्छन् । सुनाखरीका २५ हजारभन्दा बढी प्रजाति छन् । यति धेरै प्रजाति भए पनि फूलको संरचनाकै आधारमा तिनीहरूको आ–आफ्नै पहिचान बनेको छ ।
संसारभर पाइने सुनाखरीका प्रजातिमध्ये नेपालमा कति प्रजाति पाइन्छन् त ? यसबारे विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन र प्रकाशन त भएका छन् । तर, ती अध्ययन र प्रकाशनमा फरक–फरक तथ्यांक रहेको छ ।
सुनाखरीको बाह्यपत्र (क्यालिक्स) र पुष्पपत्र (कोरल्ला) उस्ताउस्तै देखिन्छ, जसलाई संयुक्त रूपमा टेपल भनिन्छ । तीन वटा पुष्पपत्रमध्ये केन्द्रमा रहेको विशेष बनावटको पत्रलाई ‘लेबलम’ भनिन्छ । ल्याटिन शब्दावलीमा लेबलमको अर्थ ‘लिप’ अर्थात् ओठ हुन्छ । सुनाखरीको एकै जातिबाट लेबलमकै आधारमा भिन्न प्रजाति नामकरण गरिन्छ । तर, एकै प्रजातिका लेबलममा पनि विविधता हुने भएकाले पहिचान गर्न कहिलेकाहीं सुनाखरी विज्ञहरू नै अलमलमा पर्छन् ।
हामीकहाँ सुनाखरीको वैज्ञानिक अनुसन्धान सन् १८०२ देखि शुरू भएको हो । अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी नेपालीले नेपालकै सुनाखरी अनुसन्धानमा विद्यावारिधि गरिसकेका छन् । नेपालबाट संकलित सुनाखरीको नमूना संसारभरका ३८ भन्दा बढी संग्रहालयमा संग्रहित छन् । जसका आधारमा हामीकहाँ ३८० प्रजातिका सुनाखरी पाइने डा. केशवराज राजभण्डारी र संजीवकुमार राई लिखित ‘अ ह्यान्डबूक अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल, भोलम वन’ मा उल्लेख छ (सन् २०१७; पृष्ठ ६८–१५७) । तर, त्यसअघि सन् २०१५ मा राजभण्डारी एक्लैले लेखेको पुस्तक ‘अ ह्यान्डबूक अफ द अर्किडस् अफ नेपाल’ का अनुसार, नेपालमा सुनाखरीका प्रजाति ४५१ छन् भन्ने जानकारी छ ।
राजभण्डारीको सन्् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक संग्रहित नमूनाका आधारमा नभई प्रकाशित पुस्तक तथा जर्नलका विवरणबाट तयार गरिएको हो । तर, सन् २०१७ मा प्रकाशित पुस्तकमा सुनाखरी सम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्रिय हर्वारियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला, गोदावरी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागमा संग्रह गरिएका आधारमा तयार गरिएको हो । यी दुई संग्रहालयमा क्रमशः २७७ र १५३ प्रजातिका सुनाखरीका नमूना छन् । एउटा संग्रहालयमा भएका अधिकांश प्रजाति अर्को संग्रहालयमा पनि छन् । तर, यी दुवै संग्रहालयमा सूचीकृत ३८० प्रजातिमध्ये करीब ७० प्रजातिका नमूना संग्रह भएको देखिन्न । तिनीहरू विश्वका करीब तीन दर्जन संग्रहालयमा संग्रहित छन् ।
राजभण्डारीले नेपालका साथै भारत, बेलायत र जापानका संग्रहालयमा सुनाखरीका नमूना अध्ययन गरेका छन् । युवा पुस्तामा सुनाखरीको अनुसन्धानमा केन्द्रित डा. भक्त रास्कोटी हुन्, जसले विश्वका निम्ति एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ सुनाखरी पत्ता लगाइसकेका छन् ।
पछिल्लो पुस्तकको भूमिकामा ‘पेनिसया पंचासीएन्सिस्’ भनिने प्रजातिको नाम अगाडि ‘एस्टरिक’ (८) चिह्न दिइएको छ । उक्त प्रजाति पत्ता लगाउने आविष्कार सुवेदीले यसको नमूना राष्ट्रिय हर्वारियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला, गोदावरीमा संग्रह गरेको जनाएका छन् । तर, ‘एस्टरिक’ ले सम्बन्धित प्रजातिको नमूना कतै फेला नपरेको भन्ने जनाइएको छ । यसबाट नेपालमा सुनाखरीका प्रजाति ३७९ मात्र छन् भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उक्त पुस्तकमा केही प्रजातिको पहिचान नै गलत गरिएका कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालको रैथाने सुनाखरी भनेर एल.आर. शाक्य र आर.पी. चौधरीले ‘ओबेरिना नेपालेन्सिस्’ पत्ता लगाएका थिए । उक्त प्रजाति नयाँ नभई ‘ओबेरिना रुफिलब्रिज्’ को एक उप–प्रजाति हो भन्दै डा. केशवराज राजभण्डारी र रीता क्षेत्रीले ‘ओबेरिना रुफिलब्रिज उप–प्रजाति नेपालेन्सिस्’ नामकरण गरेका छन् । यसको अर्थ यो उप–प्रजातिलाई कुनै समय गलत पहिचान गरी ‘ओबेरिना नेपालेन्सिस्’ भनियो ।
केही सुनाखरी विज्ञले भने नेपालमा ४५१ प्रजातिकै सुनाखरी पाइन्छन् भन्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, डा. राजभण्डारी र संजीवकुमार राईले पुस्तक लेख्दा संसारभरका संग्रहालयका सुनाखरी सम्बन्धी तथ्यांक हेर्न छुटाए । पक्कै पनि संग्रहित नमूनाको तथ्यांक फेला परे संख्या बढ्नेछ । यसबाट के सन्देश गएको छ भने, पुस्तक तथा जर्नलमा नेपालमा यति प्रजातिका वनस्पति छन् भनेर तिनीहरूका नालीबेली लेखेर मात्र हुन्न, तिनको नमूना कुनै न कुनै संग्रहालयमा संग्रहित हुनुपर्छ । एकीकृत रूपमा तथ्यांक तयार गरिंदा नमूना बाहेकलाई मान्यता दिइँदैन ।
नेपालमा पत्ता लागेको ‘सिम्बिडियम’
सुनाखरी अक्सर वैशाख–जेठ महीनामा बढी फुल्छ, कात्तिक–मंसीरतिर सीमित प्रजाति मात्रै फुल्छन् । यो सिजनमा फुल्नेमध्ये एक प्रजाति ‘सिम्बिडियम इरिडिओइड्स्’ हो । गएको कात्तिकमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित गोलाबजार नजिकै यो प्रजाति प्रशस्त संख्यामा फुलेको देखियो । यसकै जस्तो लेबलम अन्य प्रजातिमा पनि पाइने भएकाले अलमलिएँ । त्यो कुन प्रजाति होला भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखें ।
वरिष्ठ वनस्पतिविद् डा. केशवराज राजभण्डारीले तत्कालै प्रतिक्रिया लेखे, ‘फूलको व्यास ५ सेन्टिमिटरभन्दा बढी छ भने ‘सिम्बिडियम इरिडिओइड्स्’ हुनुपर्छ ।’ त्यसको व्यास ६ सेन्टिमिटरभन्दा बढी आकलन गर्न सकिन्थ्यो ।
यसको टेपलमा हल्का पहेंलो पृष्ठभूमिमा हल्का खैरो रङका धर्साहरू छन् ।
‘सिम्बिडियम इरिडिओइड्स्’ नेपालबाटै सन् १८२५ मा पत्ता लागेको हो । बेलायतस्थित न्याचुरल हिष्ट्री म्युजियम, लन्डन र रोयल बोटानिकल गार्डेन्स क्युमा संग्रह गरिएको नमूना अनुसार, त्यसको नमूना सन् १८१९ र १८२१ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट संकलन भएका थिए । सन् १८१९ को नमूना नेपालस्थित इष्ट इण्डिया कम्पनीको स्थायी प्रतिनिधि इडवार्ड गार्डनर र सन् १८२१ को नमूना नाथानियल वालिचबाट संकलन गरिएको हो ।
‘सिम्बिडियम इरिडिओइड्स्’ को लेबलम लाम्चो र किनारा तल–माथि खुम्चिएको छ । ससाना रौंहरू अघिल्तिर कम र पछिल्तिर विशेष लामा र बाक्ला छन् । यस्तै, रुपरङको एक अर्को प्रजाति ‘सिम्बिडियम ट्रासियनम्’ नेपालमा आयातित मानिन्छ । यो सुनाखरी काठमाडौं उपत्यकामा दार्जीलिङ मिरिकबाट ल्याएको भेटेको छु । ‘सिम्बिडियम ट्रासियनम्’ को लेबलमको अघिल्तिरको भाग लाम्चो नभई फराकिलो हुन्छ । यसको लेबलममा दुवैतिरका किनार ‘सिम्बिडियम इरिडिओइड्स्’ को भन्दा चौडा आकारमा गहिरिएका छन् । रौंहरू बाक्लै र लामा छन् ।
पहिले नेपालमा पाइने भनिएका तर नमूना संग्रह गरिएको ठाउँबारे थाहा हुन नसकेका सुनाखरी धेरै छन् । तिनीहरू नेपालको कुन भागमा पाइन्छ, स्थलगत अध्ययनमा विश्वविद्यालय, वनस्पति विभाग तथा स्वतन्त्र अध्येताले काम अगाडि बढाए हाम्रो सुनाखरीको तथ्यांक बढ्नेछ ।